"Aquamarine", एक बोर्डिङ घर2* (सोची, पाहुना): समीक्षा, वर्णन र समीक्षा
पाहुना - एक अद्वितीय समुद्र तटीय रिसोर्टमा स्थानीय हलिडे संग धेरै लोकप्रिय छ। यो सहरमा कारण विभिन्न स्थानहरू गर्न औसत हावा तापमान पनि 1 डिग्री सोची भन्दा उच्च। वास्तवमा, होस्ट - रूसी संघ को न्यानो रिसोर्ट। निस्सन्देह, यो गाउँ मा पर्यटक पूर्वाधार ठीक विकास गरे। त्यहाँ होटल को एक महान नम्बर सहित यहाँ छ। उदाहरणका लागि, एक राम्रो सेवा होस्ट पेन्सन "Aquamarine" प्रदान गर्दछ।
यो होटल तटों Khostinsky नजिक निकटता मा स्थित छ। यसको क्षेत्र पर्यटकहरु देखि तट प्राप्त गर्न3मिनेट भन्दा कुनै अधिक छ। रेलवे स्टेशन "होस्ट" होटल देखि 15 मिनेट पैदल छ। निस्सन्देह, यो राम्रो टाढा छ। संग सामान पर्यटकहरु होटल जान लागि शहर मा रेल द्वारा आइपुगे, सम्भवत, यो पनि सहज हुने छैन। तसर्थ, प्रायजसो, यो जटिल मा कोठा बुक गरेका हलिडे, यहाँ ट्याक्सी द्वारा प्राप्त जो स्टेशन अगाडि वर्ग सिधै हुन सक्छ किराया।
समुद्र तटों को सम्बन्ध मा राम्रो स्थान - यो फरक "Aquamarine",2* पेन्सन के हो, त्यसैले छ। सोची, एडलर, Khosta समीक्षा पूर्वाधार विकास सन्दर्भमा पर्यटक धेरै राम्रो कमाएका छन्। तर यी सबै रिसोर्ट्स मा वासस्थान, पाठ्यक्रम, समुद्र रूपमा नजिक चयन गर्न छ। पनि एक राम्रो सार्वजनिक परिवहन संग होटल हुनेछ सबैभन्दा छैन संभावना पनि सुविधाजनक गर्न समुद्र तट गर्न हरेक दिन यात्रा गर्न र फिर्ता।
धेरै पर्यटकहरु सम्बन्धित रेल को निकटता बेफाइदा पेन्सन "Aquamarine" स्थान। यस कारण, यो जटिल को कोठा मा यो अक्सर हल्ला छ।
"Aquamarine" केन्द्र स्थित मेडिकल जटिल "Matsesta" बाट 200 मिटर मा। इच्छित भने, बोर्डिङ समावेश यहाँ balneo- र भौतिक चिकित्सा प्रक्रियाहरु (आवश्यक अस्पताल कार्ड) धाउन सक्नुहुन्छ।
को "Aquamarine", एक बोर्डिङ घर एक मचान संग2* (सोची, Hosta) निर्माण बरु मूल वास्तुकला छ। यो होटल धेरै धेरै राम्रो देखिन्छ कि भन्न, यो असम्भव छ। तर यो अझै पनि धेरै असामान्य र आकर्षक देखिन्छ।
यस बोर्डिङ घरमा यसको क्षेत्र, दुर्भाग्य, कुनै। परिसर, साथै धेरै पर्यटकहरु को राय यसको बाहिरी, को आंतरिक, एकदम चिटिक्क र दिन लायक तर, यदि धेरै शानदार देखिंदैन। यस बोर्डिङ माथिल्लो फर्श मा घर अतिथि एलिभेटर मा चढ्नु गर्न सक्नुहुन्छ।
114 एकदम सहज कोठा को कुल - यो छुट्टी-पेन्सन "Aquamarine" (रूस, सोची) के प्रदान गर्दछ छ। 4.33 /5- समीक्षा आधारित यो केन्द्र, दर, एकदम उच्च छ। कोठा राम्रो पेन्सन संग सुसज्जित छन् र 2-3 मान्छे समायोजित गर्न सक्छन्। केही कोठा मा तपाईं अतिरिक्त स्थान आदेश गर्न सक्नुहुन्छ। उत्तरार्द्ध मामला मा, कोठा मा कुर्सी-ओछ्यानमा तह स्थापित।
यस बोर्डिङ घर कोठा मा बस्दा सुविधा द्वारा सुनिश्चित छ:
पनि लुगा र बिस्तर टेबल लागि केन्द्र को सबै कोठा मा वार्डरोब सज्जित। शवर कोठा बोर्डिङ घर "Aquamarine" त्यहाँ व्यक्तिगत छन्।
को कोठा को बासिन्दा को राय
तसर्थ, कोठा यसको अतिथि एक अपेक्षाकृत राम्रो-सुसज्जित पेन्सन "Aquamarine" (रूस, सोची) प्रदान गर्दछ। यस बोर्डिङ घर को समीक्षा र कोठा नेटवर्क मा भन्दा हस्तान्तरण गर्दै छन्, तथापि, मिश्रित छन्। सफा कोठा नौकरानियां अक्सर जटिल छन्। त्यसकारण, तिनीहरूले चिटिक्क र एकदम आरामदायक हेर्न। तर, दुर्भाग्य, यो धेरै सानो मा कोठा को केन्द्र मा क्षेत्र। साथै, कुनै पनि कोठा बोर्डिङ घरमा कुनै बालकनी छ। ड्राई समुद्र तट सुविधाहरु अतिथि सामान्यतया शवर मा पाइप पर्छ।
परिसर को कोठा मा फर्नीचर एकदम नयाँ सेट गरिएको छ। को बेड पर्याप्त आराम गर्दै छन्। तर कहिले काँही lodgers मा उपकरण कोठा समस्या उत्पन्न गर्छन्। उदाहरणका लागि, एक यात्री समातिए वा अगाडि ढोका को अन्त अघि बन्द बिना एक असफल ओछ्यानमा देखावटी संग कोठा हुन सक्छ।
यो पेन्सन पाहुना को धेरै गम्भीर आलोचना छ र अटारी। सुरुमा, यो भवन मा भएको थियो। एकै समयमा, अतिरिक्त लोड मा एक भवन परियोजना जग मा धेरै पर्यटकहरु अनुसार यो गणना गरिएको छैन। तसर्थ, बोर्डिङ घरमा अर्को स्थित ट्रयाक मा रेल को खण्ड, समयमा, अटारी बस rocking शुरू गर्छ। धेरै vacationers पनि छ कि डरलाग्दो होटल को छैटौं तल्ला मा एक कोठा मा बस्न भन्नुहोस्। अन्य कुराहरू, र अटारी मा निर्माण मा एक एलिभेटर बीचमा, पाठ्यक्रम, काम गर्दैन। छैटौं तल्ला भाडादारों आफ्नो पाँचौं गर्न सिढी चढ्नु छ।
साथै, पेन्सन "Aquamarine"2* (Hosta, रूस), नेटवर्क भिन्न छन् जसमा सेवाको समीक्षा, यस्तो सुविधाहरु रूपमा रमाइलो गर्न मौका यसको अतिथि भेटी:
मालिश र सौन्दर्य उपचार।
साथै, पेन्सन पनि एक निजी सना छ। परिसर को एक यात्रा होस्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह सीधा आफ्नो क्षेत्र मा खरिद गर्न मौका छ। पेंशन मा एउटा सानो दोकान अनुरूप विशेषज्ञता संचालित।
आफ्नो कार होस्ट आउन जो पर्यटकहरूले पार्किङ होटल पछिको मा छोड गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, सुरक्षित साथ अगाडि डेस्क मा एक बोर्डिङ घरमा। इच्छित भने, तपाईं कागजात र अन्य बहुमूल्य वस्तुहरू भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, तपाईं अलग यस सेवाको लागि भुक्तानी गर्न आवश्यक छ। साथै, होटल राम्ररी सुसज्जित धुलाई कोठा छ। यहाँ, यदि चाहेको, को धुने कुराहरू मैला पार्नु गर्न सक्नुहुन्छ।
पेन्सन "Aquamarine" (Hosta, रूस): सेवा बारेमा प्रतिक्रिया
लोकप्रिय को केन्द्र मा कोठा, हालसम्म सबै अतिथिहरूको। नेटवर्क मा पेन्सन सेवा बारे, त्यहाँ मूलतः मात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया छन्। कर्मचारीहरु भद्र छन् र चाँडै भाडादारों देखि arising समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। पर्यटकहरु केही उजुरी छ कि, उदाहरणका लागि नौकरानियां कुनै पनि समयमा हो, कोठा मा सफा आउन मात्र हो। मालिकहरू सुतेको हुँदा सहित।
साथै, केही नेट पेन्सन "Aquamarine" धेरै पाहुनाहरूलाई यो रात बन्द छ पाउन। कोठा मा ढिलै भएपनि मालिक, को पाठ्यक्रम, अनुमति। तर यस मामला मा lodger सडक मा गार्ड लागि प्रतीक्षा हुन सक्छ। रात पारी काम गर्ने होटल को एक कर्मचारी, अक्सर भवन को दौर बनाउँछ, र यो सिर्फ ठाउँमा हुन सक्छ।
एक बोर्डिङ घरमा एलिभेटर सन्दर्भमा आफ्ना पाहुनाहरूलाई ज्यादातर मात्र राम्रो समीक्षा हो। यसलाई ठीक र चुपचाप काम गर्दछ। मात्र कुरा - एलिभेटर कहिलेकाहीं लाइनहरू। पेंशन "Aquamarine" को निर्माण एकदम ठूलो छ। लिफ्ट यो छ रूपमा, दुर्भाग्यवश, केवल एक।
यो खाना वा बिना पर्यटकहरु "Aquamarine", एक बोर्डिङ घर2* (सोची, पाहुना), नम्बर प्रदान गर्दछ। को पर्यटकहरु को जटिल दृश्य को भोजन कक्ष मा नाश्ता, भोजन र खाने सन्दर्भमा त्यहाँ भिन्न छन्। केही अरूलाई उनलाई रुचि छैन, व्यञ्जन यहाँ स्वादिष्ट सेवा विश्वास गर्छन्। कुनै पनि मामला मा, होटल अतिथि को बहुमत बोर्डिङ घर मा भोजन कोठा मा भाग धेरै सानो छ कि उल्लेख गरे। तर एकै समयमा र मेनु को केन्द्र मा एकदम विविध छ।
समुद्र रूपमा पहिले नै छैन पनि टाढा, उल्लेख गरिएको "Aquamarine", एक बोर्डिङ घर2* (सोची, Hosta) छ, बाट। बीच केन्द्र, सबै अपवाद बिना पर्यटकहरु आराम गर्न धेरै सहज लाग्छ। Khost मा सबैतिर रूपमा उहाँले shingle ढाकिएको छ। केही ठाउँमा मात्र पत्थर फेला छन्। यो समुद्र तट मा समुद्र लग इन समतल र पर्याप्त आराम छ। तथापि, पानी पनि boulders उत्पन्न हुन सक्छ। तसर्थ, यस बीच मा स्विमिंग को shales मा सबै भन्दा राम्रो छ।
यस क्षेत्रमा मानिसहरू सामान्यतया बाँकी धेरै छन्। तर एकै समयमा केबिन र शौचालय परिवर्तन, यहाँ तट संग र सुसज्जित छ उदाहरणका लागि धेरै neploho.U सागर। साथै, इच्छित भने, समुद्र तट मा तपाईं कुर्सियों र छाते भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं नास्ता, भोजन वा खाने हुन सक्छ जहाँ एक क्याफे पनि छ। यो समुद्र तट मा मान्छे सामान्यतया एकदम धेरै छ।
विभिन्न रेस्टुरेन्ट, क्याफे र तत्काल वरपर स्थित पसलहरूमा एक विशाल संख्या - यो जसको लागि केहि केहि अलग्गै छ, धेरै पर्यटकहरूले "Aquamarine" (अतिथि गृह) प्रशंसा गर्छौं। सोची - एक बरु राम्ररी विकास पूर्वाधार (Khostinsky जिल्ला सहित) संग एक रिसोर्टमा। र जटिल को मेहमान fullest यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पसलहरूमा र क्याफेहरूमा साथै, त्यहाँ जटिल को वरपर र एउटा सानो बजार छ। "Magnit" पसलहरु तपाईं पेन्सन देखि फल, तरकारी, मिठाई र यति मा। डी अतिरिक्त अंक चासो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने काम गरिरहेको छ। यो कारणले गर्दा पर्यटकहरुका लागि उत्पादनहरु को काला सागर रिसोर्ट्स कम मूल्यहरु गर्न व्यापार को यो नेटवर्क सबैभन्दा लोकप्रिय छ।
सोची मा, होटल बस पुग्न सकिन्छ। सार्वजनिक परिवहन टाढा छैन यो देखि स्थित छ। त्यहाँ अक्सर सोची मा होस्टबाट बसें छन्। तर, दुर्भाग्य, तिनीहरू अझै पनि लगभग सधैं भीड हो।
साथै, पेन्सन "Aquamarine" र यसको आफ्नै डेस्क संचालित। यहाँ अतिथि आवश्यक छ भने स्थानीय आकर्षण गर्न यात्राको योजना केन्द्र सम्पर्क गर्न सक्छ। र पाहुना ती धेरै छ। उदाहरणका लागि, छनौट गर्ने पर्यटकहरु काला सागर "Aquamarine" मा बस्न, एक बोर्डिङ घर2* (सोची, होस्ट) भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ:
पहाड ठूलो Akhun;
Б ольшой Ахун является одной из самых популярных у туристов достопримечательностей сочинского побережья. माउन्ट बी Olsha Ahun सोची तट को सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण मध्ये एक हो। इच्छित भने, तपाईं अवलोकन टावर, जो एक भव्य परिदृश्य भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। पर्वतमा को bowels मा Akhun 20 भन्दा बढी गुफाहरु छ, र कवर यसको वन 200 भन्दा बढी बोट प्रजाति, endangered रूपमा सूचीबद्ध 34 जो छन्।
гурские водопады — это национальный парк в Хостинском районе, расположенный в4км от побережья. एक Gursky झरने - यो, Khosta जिल्ला एक राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थित तट देखि4कि छ। को "शैतानको हट" - यो प्राकृतिक चमत्कार गर्न बाटो मा, र तपाईं अर्को आकर्षण भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
Vorontsov गुफाहरु होस्ट देखि 20 किलोमिटर टाढा छन्। ы «Круглый», «Пантеон» и «Прометей», ход «Труба» и т. д. Стоит вход в Воронцовские пещеры около 350 рублей. आकर्षण गर्न भ्रमण किनेको पर्यटकहरु, "चमक", को Grotto गरेको "गोलो", "Pantheon" र "Prometheus", पाठ्यक्रम "पाइप" र यति मा को हल भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। डी यो Vorontsov गुफा बारे 350 rubles गर्न प्रवेश लायक छ।
यस होटल को लाभ को एक प्रदान सेवा, मूल्यहरु को तुलना मा, कम छ। र होटल "Aquamarine" (सोची), vacationers, र विशेष साइटहरु को पृष्ठ प्रदान गर्ने जानकारी बारे समीक्षा स्पष्ट यस संकेत गर्छ। यो प्रति दिन बारेमा 1,500 प्रति व्यक्ति rubles को कुल यस होटल मा रहनु पर्छ। यो, को पाठ्यक्रम, धेरै छैन। तुलना लागि: सबै भन्दा रिसोर्ट्स प्रति दिन 2000 rubles देखि मूल्य सुरु होस्ट।
होटल ग्रैंड जास्मिन Resort3(पटाया / थाईल्याण्ड)
क्रोएशिया होटल - लक्जरी को दुनिया पारित
Alushta, होटल "समुद्र": फोटो, होटल स्पा बारे समिक्षा
विवाह - यो अनुष्ठान लागि हो? विवाह को रहस्य के हो? को अर्थोडक्स चर्च मा विवाह को नियम
अन्ना Nazareva: बच्चाहरु रूपमा उनको भूमिका लागि
एक मान्छे, कसरी विभाजन बच्न संग जानेबेलामा
पार्क "Muzeon": प्राप्त कसरी र के हेर्न?
कुनै ध्वनि स्काइप मा - डरलाग्दो वा छैन?
Sokolova Elena Sergeevna: वर्तमान महिला आंकडा स्केटिङ
Alkyon Resort होटल4* (Kassandra, Halkidiki): कोठा को विवरण, समीक्षा
कोक ओवन ग्याँस: संरचना, प्रयोग, उत्पादन
कोजी सुजुकी: "कल" र आफ्नो दर्शन
विनीज केक - चेरी र जाम संग नुस्खा